October 2019 - Page2of 10 - Ukali Orali
उदयपुरबाट बिरामी लिएर बिराटनगर जाँदै गरेको एम्बुलेन्स दुर्घटना
गाईघाट । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउपालिकाको एउटा एम्बुलेन्स दुघर्टनामा परेको छ । आज बिहान ५ बजे सुनसरीको दुहवीमा विरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई ट्रकले बिहान ५ बजे ठक्कर दिएको हो । बिरामी बोकेर आएको स१झ ५२८ नम्बरको एम्बुलेन्सको अगाडीको अधिकांश भाग क्षती पुगेको छ । एम्बुलेन्समा रहेका चालक र विरामीको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ । उदयपुरगढी वडा नम्बर… Read More »
अनियन्त्रित कार कुपन्डोलको एक रेष्टुरेन्टभित्र पसेपछि … हेर्नुहोस तस्विरहरु
ललितपुरको कुपन्डोलमा कार अनियन्त्रित हुँदा एनपिपी रेष्टुरेन्टभित्र पसेको छ। सोमबार दिउँसो सर्भिसिङ गराएर आएको प्रदेश ३ बिएए ३०६९ नम्बरको गाडी अनियन्त्रित भइ रेष्टुरेन्टभित्र छिरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त गाडी मुनीराज उपाध्यायको रहेको पुल्चोक प्रहरी वृत्तले जनाएको छ। ‘सर्भिसिङ गरिसकेर ल्याउँदै गरेको रहेछ, पछि अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुन पुग्यो’ पुल्चोक प्रहरी वृत्त शाखाका इन्स्पेक्टर माधव केसीले… Read More »
पहिले भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो । एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो । भाकल गर्ने व्यक्तिले केही पाउँ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस, बिरामी हुँदा ठीक होस वा कसै सँग टाढा बसौं भनी आफ्नो ईच्छा अनी आफुले छनौट गरी… Read More »
एजेन्सी । श्रीमानले श्रीमतीलाई विवाह एनिभर्सरीमा सामान्यतया लुगा, गरगहना इत्यादी उपहार दिने गर्दछन् । कसैले महंगा महंगा सामानहरु पनि दिन्छन् । तर अमेरिकामा एक श्रीमानले भने आफ्नो श्रीमतीलाई अंग नै उपहार दिएका छन् । आफ्नो २३ औं एनिभर्सरीमा आफ्नो अंग नै उपहार दिएका हुन् । ति श्रीमानले मेमोरियल रिजनल हस्पिटलमा उपचार गराईरहेकी श्रीमतीलाई मृगौला नै… Read More »
काठमाडौं / नेपाल टेलिभिजन बाट प्रसारण भइरहेको “सक्किगोनि” हास्य टेलिसिरियलका कलाकारहरु विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी परेपछि, सक्किगोनी टिमका मुख्य कलाकार अर्जुन घिमिरे र कुमार कट्टेल दौडधुप गरिरहेका छन् । कानुन बिपरित आफूहरु विरुद्ध उजुरी हालेकोमा मिडिया हब प्रति आक्रोश पोख्दै पाँडेले एक मिडियामा हामी मिडिया हबको नोकर हैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । कुमार… Read More »
राजधानीको बसुन्धरामा गुल्मीकी एक युवतीलाई आफू डेरामा बस्दैं आएको घरबाट घरधनीले सोही दिन घर छाड्न उर्दि जारी गरे ।बसुन्धाराकै एक कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययानरत ती युवतीलाई घरधनीले एकैदिनमा कोठा छाड्न भनेपछि उनी निक्कै तनावमा थिइन् । उनको अनुहारमा स्पष्ट देखिने तनावका कारण सुरुमा स्थानीय छिमेकीले समेत एक महिला विद्यार्थीलाई एक्कासि घर छाड्न भन्नु घर… Read More »
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यमा आफुअग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरुलाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनसक्नेछ । तपाईको कार्य क्षेत्रमा सामान्य त्रुटिका कारण मानसम्मानमा ठेस पुग्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ज्यादा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ ।… Read More »
काठमाडौं ४ असोज / हाँस्यकलाकार कुमार कट्टेल र अुर्जन घिमिरे विरुद्ध मिडिया हवले प्रहरीमा उजुरी हालेपछि यति बेला फेरि अर्को विवादमा तानिएको छ ।’ उजुरी परे लगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेका कुमार कट्टेल जिग्रिले फेसबुकमा एक स्टाटस् लेखेका छन् : यही देश मा बसेर कलाकारिता गर्नु र कलाकार बन्नु नै मेरो गल्ती हो भने उजुरी… Read More »
काठमाडौं / रुपा वली मगर र कृष्ण ओली यतिबेला गृहजिल्ला रुकुम पुगेका छन् ! उनीहरु स-परिवार दशैँ तिहार मनाउन आफ्नो घर रुकुम पुगेका हुन् ! दुवैहात खुट्टा जोडिसकेका कृष्ण आफु जन्मेको घर रुकुममा तिहार मनाउने भएका छन् ! हात खुट्टा जोडेपछि उनीहरु पहिलो पटक रुकुम पुगेका हुन् ! यस अघि उनीहरु मुम्बई बाट हात र… Read More »
पत्याउनुहुन्छ? यि राशि भएका युवतिले सधै प्रेममा धो’का दिन्छन् । जानिराख्नुहोस्
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुनै पनी ब्यक्ती चरित्र स्वभावको बारेमा त्यस ब्यक्ती कुण्डलीको सहायताले उस्को बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसै त हाम्रो देश नेपालमा पनी हिन्दु धर्मका अनुसार विवाह अगि नै केटा र केटीको कुण्डली अनुसार उनिहरूकोख भाग्य कुण्डली मिलाउने गरिन्छ । बैवाहिक जिवनमा बाधिन लागेका केटा र केटी कुण्डली बाट यो पत्ता लगाउन सकिन्छ… Read More »